Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Fungal infections (1) မှိုအမျိုးမျိုး ဆေးအမျိုးမျိုး (၁)
Wed, Feb 15, 2012 at 1:51 PM ကျွန်တော်က အသက် ၂၂ နှစ်ရှိတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ ငယ်ငယ်တည်းက အရေးပြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အနာရောဂါတွေ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၆ နှစ်တုန်းက ပေါင်ကြားမှာ ပွေးပေါက်ဘူးပါတယ်။ ပထမ တစ်ဖက်တည်းပေါက်ပြီး နောက်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ တင်ပါးမှာလည်း ယားနာနဲ့ ပြည်ဖုတွေ ပါပေါက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့တုန်းကတော့ ဖျူစင်ဖို့စ်လား ဘာလားမသိဘူး အဲဒီ့သောက်ဆေးနဲ့ လိမ်းဆေး ပေါင်းစုံနဲ့ ပျောက်သွားပါတယ်။ အခုပေါင်ကြားမှာ နှင်းခူလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မှိုတက်နေသလိုပုံစံမျိုးကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်တာက (၂) နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ပွားလည်းမပွားပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ယားလည်း မယားပါဘူး။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲမှသာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီနဲ့ ချွေးကြောင့် ယားသလို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာပါ။ အဲလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းတာပေါ့ဗျာ။ ပုံနှင့်တကွ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီဟာ ပျောက်သွားဖို့အတွက် ဘယ်သောက်ဆေးနဲ့ ဘယ်လိမ်းဆေးကို ဘယ်နေရာမှာ အလွယ်တကူဝယ်သုံးရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဆေဖိုးက သောင်းချီပေးရရင်တော့ မတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။
မှိုတွေကနေ အပေါ်ယံ၊ အတွင်းထဲထိ ကူးစက်စေတယ်။ မှိုဖြစ်နေရင်း တခြားပိုးလဲ ဝင်တာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် နေရာ ၃ မျိုးအတွက် ဆေးသပ်သပ်ရှိတယ်။
1. Superficial fungal infections အပေါ်ယံ မှိုရောဂါများ
(A) Creams or Sprays လိမ်းဆေးတွေ = Clotrimazole, Miconazole nitrate, Econazole, Ketoconazole, Ciclopirox, Naftifine, Itraconazole, Terbinafine, Tolnaftate, Fluconazole, Whitfield's tincture (Salicylic acid + Benzoic acid) (B) Oral antifungal drug စားဆေးတွေ = Ketoconazole or Griseofulvin
2. Systemic infections အတွင်းထဲရောက် မှိုရောဂါများ
Amphotericin B, Fluconazole and Itraconazole and Flucytosine alone or in combination with other antifungal medications
3. Fungal infections + Infection မှိုရောဂါ + ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း
Lotrisone® (Betamethasone + Clotrimazole)
ဆေးတွေကို အက္ခရာစဉ်လိုက် ရေးပါမယ်။
Amphotericin B (အင်မ်ဖိုတာရာစင် ဘီ) ထိုးဆေးကို အသက်ရန်ရှာနိုင်တဲ့ မှိုရောဂါအတွက်ပေးတယ်။ တခြားမှိုရောဂါ အတွက် မပေးဘူး။ Aspergillosis, Cryptococcosis (Torulosis), North American blastomycosis, Systemic candidiasis, Coccidioidomycosis, Histoplasmosis, Zygomycosis (Mucormycosis), Conidiobolus, Basidiobolus, Sporotrichosis တွေအတွက် ပေးတယ်။ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး တနေ့မှာ 1.5 mg/kg ထက်ပိုမပေးရဘူး။ IV infusion is 0.1 mg/mL (1mg/10mL) သွင်းဆေးအနေနဲ့ ၂-၆ နာရီအထိကြာအောင် ဖြေးဖြေးပေးရတယ်။ ဆေးကိုလဲ စမ်းပြီးမှ ပေးရမယ်။
(CNL8, Loprox, Loprox TS, Penlac) (ခရင်မ်)၊ (ဂျဲလ်)၊ ဆေးရည် နဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်။
Ringworm of the body (Tinea corporis) ကိုယ်ခန္ခာပွေး၊ Ringworm of the foot (Tinea pedis; Athlete's foot) ခြေထောက်မှို၊ အားကစားသမားခြေထောက်၊ Ringworm of the groin (Tinea cruris; Jock itch) ပေါင်ခြံမှို-ဂျွတ်၊ Sun fungus (tinea versicolor; pityriasis versicolor) နေရာင်ထိတဲ့နေရာမှို-ပွေး၊ Candida (Monilia) infections ပါးစပ်၊ မွေးလမ်းမှို၊ Seborrheic dermatitis အဆီပြန်မှိုရောဂါ၊
Clotrimazole cream solution or lotion 1% (ခရင်မ်)၊ လိမ်းဆေး၊ Buccal troche 10 mg ဆေးရည်၊ ပါးစပ်ထည့်ဆေး၊
Clotrimazole Vaginal suppositories မွေးလမ်းထဲထည့်ဆေးတောင့်၊ 100 mg တညတခါ၊ ၇ ရက်။ 200 mg တညတခါ၊ ၃ ရက်။
Clotrimazole Vaginal cream 1% and 2% မွေးလမ်းထဲထည့် (ခရင်မ်)၊ တညတခါ၊ ၇ ရက်။
Econazole (Spectazole) (အီကိုနာဇိုးလ်)
Ringworm of the body (Tinea corporis) ကိုယ်ခန္ခာပွေး၊ Ringworm of the foot (Tinea pedis; athlete's foot) ခြေထောက်မှို၊ အားကစားသမားခြေထောက်၊ Ringworm of the groin (Tinea cruris; jock itch) ပေါင်ခြံမှို-ဂျွတ်၊ Sun fungus (tinea versicolor; pityriasis versicolor) နေရာင်ထိတဲ့နေရာမှို-ပွေး၊ Candida (Monilia) infections ပါးစပ်၊ မွေးလမ်းမှို၊
Cream (ခရင်မ်)၊ တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ ၂-၄ ပါတ်။
• Cryptococcal meningitis မှိုကြောင့် ဦးနှောက်မှေးရောင်ခြင်း၊ 400/mg on the first day, followed by 200 mg onceaday for at least 10 to 12 weeks; Children6months to 13 years of age 12 mg/kg on the first day, followed by6mg/kg onceaday for at least 10 to 12 weeks
• Esophageal candidiasis အစာမြိုပြွန် မှိုရောဂါ၊ 200 mg on the first day, followed by 100 mg onceaday for at least3weeks; Children6months to 13 years of age6mg/kg on the first day, followed by3mg/kg onceaday, for at least3weeks
• Oropharyngeal candidiasis အာခေါင်-လည်ချောင်း မှိုရောဂါ၊ 200 mg on the first day, followed by 100 mg onceaday for at least2weeks; Children6months to 13 years of age6mg/kg on the first day, followed by3mg/kg onceaday, for at least2weeks
• Other infections that may occur in different parts of the body တခြားမှိုရောဂါများ၊ 400/mg per day; Children6months to 13 years of age6to 12 mg/kg/day
• Vaginal candidiasis မွေးလမ်းကြောင်း မှိုရောဂါ၊ 150 mg taken asasingle dose
• Bone marrow transplantation ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးခြင်းမှာ မှိုပိုးကနေ ကာကွယ်ရန်၊ 400 mg onceaday
50 to 150 mg/kg/day in divided doses every 6 h
မေးတဲ့သူပြောတဲ့ Fulcin Forte ဟာ ဒီဆေးပါဘဲ။ Jock itch ဂျွတ်၊ Athlete's foot အားကစားသမားခြေထောက်၊ Ringworm ပွေး၊ Fungal infections of the scalp ဦးရေခွံပွေး-မှို၊ Fingernails and toenails လက်သည်း-ခြေသည်းမှို၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်ကနေ ၃-၄ ကြိမ်ပေးရတယ်။ ရောဂါ သက်သာပေမဲ့ ဆေးဆက်သောက်ရမယ်။ အရေပြားမှာဖြစ်ရင် ၂-၄ ပါတ်အထိပေးရမယ်။ ဦးရေခွံမှာဖြစ်ရင် ၄-၈ ပါတ်အထိ ပေးရတယ်။ လက်သည်းမှာဖြစ်ရင် ၃-၄ လအထိပေးရမယ်။ ခြေသည်းမှာဖြစ်ရင် ၆ လအထိပေးရမယ်။
Tinea capitis (Ringworm of the scalp) ဦးရေခွံမှိုရောဂါ၊ Tinea corporis (Ringworm of the body) ကိုယ်ခန္ခာမှို၊ Tinea pedis (Athlete's foot) အားကစားသမားခြေထောက်၊ Tinea unguium (Onychomycosis; Ringworm of the nails) ခြေသည်း-လက်သည်းမှို၊ Tinea cruris (Ringworm of the thigh) ပေါင်ခြံမှို၊ Tinea barbae (Barber's itch) ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကကူးလာတဲ့မှို၊ Tinea corporis, Tinea cruris, and Tinea capitis တွေအတွက် တနေ့မှာ 500 mg ပေးတယ်။ Tinea pedis and Tinea တွေအတွက် တနေ့မှာ 1.0 gram ပေးရတယ်။
Oropharyngeal candidiasis (Oral thrush) ပါးစပ် မှက္ခရု၊ Esophageal candidiasis အစာမြိုပြွန်မှို၊ Blastomycosis (Gilchrist’s disease) တိရစ္ဆာန်မှို၊ Aspergillosis အဆုပ်မှို၊ Histoplasmosis (Darling’s disease) အသက်ရှူလမ်းမှို၊ Onychomycosis ခြေသည်း-လက်သည်းမှို။ Itraconazole capsules ဆေးတောင့်ကို အစာနဲ့သောက်ရပါ။ Oral solution ဆေးရည်ကို အစာမရှိချိန်သောက်ပါ။
Aspergillosis 200 to 400/mg/day တကြိမ်တည်း ဒါမှမဟုတ် ၂ ခါခွဲပေး။
Blastomycosis or Histoplasmosis 200/mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Onychomycosis of the fingernails 200/mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
Onychomycosis of the toenails 200/mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Esophageal candidiasis 100-200/mg or 10-20 mL တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Oropharyngeal candidiasis 200/mg or 20 mL တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
အရေပြားနဲ့ လက်သည်း-ခြေသည်းမှိုရောဂါများအတွက် စားဆေး၊
Protozoal infections (ပရိုတိုဇိုးဝါး) ပိုး၊ Cushing's syndrome (ကွတ်ရှင်-ဆင်ဒရုမ်း)၊ Prostate cancer ဆီးကျိတ်-ကင်ဆာ နောက်ပိုင်း၊ နဲ့ Sarcoidosis (ဆာကွိုက်ဒိုးးဆစ်) နဲ့ Tuberculosis တီဘီရောဂါရောဂါတွေမှာ (ကယ်လ်စီယမ်) များနေတာအတွက်လဲ သုံးသေးတယ်။ Antacid လေနာဆေး နဲ့တွဲမသောက်ရပါ။
Ketoconazole 2% cream (ကီတိုကွန်နာဇိုး) (ခရင်မ်)၊
Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, Tinea (pityriasis) versicolor, Cutaneous candidiasis, Seborrheic dermatitis, Cutaneous candidiasis, Tinea corporis ၂-၄-၆ ပါတ်အထိပေးရတယ်။
Miconazole (မီကွန်နာဇိုးလ်) အပေါ်ယံဆေး၊
Cream (ခရင်မ်)၊ Lotion ဆေးရည်၊ Powder (ပေါင်ဒါ)၊ Spray liquid ဖြန်းဆေးရည်၊ Spray powder ဖြန်းဆေးမှုံ့၊
Vaginal cream မွေးလမ်းထဲထည့် (ခရင်မ်)၊ Vaginal suppository မွေးလမ်းထဲထည့်ဆေးတောင့်၊
Athlete's foot အားကစားသမားခြေထောက်၊ တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ ၁ လ။
Skin infections အရေပြားမှို ၂ ပါတ် အနည်းဆုံး။
Vaginal infections မွေးလမ်းမှို (Monistat-3) ၃ ည၊ (Monistat-7) ၇ ည။
Naftifine (တက်ဖတီဖိုင်း) လိမ်းဆေး၊
Athlete's foot (Tinea pedis) အားကစားသမားခြေထောက်၊
Jock itch (Ringworm of the groin; Tinea cruris) ဂျွတ်၊ ပေါင်ခြံပွေး၊
Ringworm of the body (Tinea corporis) ကိုယ်ခန္ဓာပွေး၊
Terbinafine (တာဘင်နဖိုင်းန်) သောက်ဆေး၊
Onychomycosis of the toenail or fingernail (Tinea unguium) ခြေသည်း-လက်သည်းမှို၊
လက်သည်းမှို 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၆ ပါတ်။
ခြေသည်းမှို 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်။
Tolnaftate (တိုလ်နက်ဖ်တိတ်) လိမ်းဆေး၊
Absorbine Jr. Antifungal, Aftate, Blis-To-Sol, Dermasept Antifungal, Fungi-Guard, Podactin, Q-Naftate, Tinactin, Tinaderm, Ting, Athlete's Foot Gel, Dr. Scholl's Athlete's Foot, Pitrex, Scholl's Athlete's Foot Spray, Scholl Tritin Antifungal Powder, Scholl Tritin Antifungal Spray Powder